Yintoni i-Mao Suit?
I-Chinese Version ye-Business Suit
Eyaziwa nangokuthi i-suit yeZhongshan (中山裝, zhōngshān zhuāng ), i-suit ye-Mao yinguqulo yesiTshayina ye-suit yeshishini laseNtshona.
I-suit ye-Mao yi-polyester i-suit-piece piece in gray, i-green green okanye i-navy blue. I-suit ye-Mao ibandakanya ibhulukhwe ye-baggy kunye nekhenki-style inkinobho phantsi kwebhokisi kunye nekholeji ekhuniweyo kunye neepokotshi ezine.
Ngubani Oyenze I-Mao Suit?
UDkt. Yat-Sen, ogqalwa ngabaninzi njengoyise weChina wamanje, wayefuna ukudala ingubo yesizwe.
I-Sun Yat-sen, eyaziwa ngokuba nguMandararin igama lakhe, uSun Zhongshan, ikhuthaza ukugqoka iimpahla ezifanelekileyo. Le saziso ibizwa ngokuba yiSan Zhongshan, kodwa ikwabizwa ngokuba yi-Mao iWest kwi-West kuba i-suit Mao Zedong yayihlala igqoke esidlangalaleni kwaye ikhuthaza abemi baseTshayina ukuba banxibe.
Ngexesha le- Qing Dynasty , amadoda ayembethe ingubo ye-mandarin (ibhatyi enekhola echanekileyo) phezu kwesigqoko esikhulu, esinexesha elide, i-skullcap kunye ne-pigtails. Ilanga lihlangene neendlela ezisempuma nasentshonalanga ukudala oko sikubiza ngokuba yi-Mao suit. Wasebenzisa umfaniswano waseJapan njengesiqalo, ukuyila ibhatyi kunye nekholeji ekhuniweyo kunye namaqhosha amahlanu okanye anesixhenxe. Ilanga litshintshile iipokotshi ezintathu zangaphakathi ezitholakalayo kwiimpahla zeNtshona kunye nezipokota zangaphandle ezine kunye nepakethe yangaphakathi. Emva koko wabhanqa ijacket eneebhulukhwe.
Uyilo o luphawu
Abanye abantu baye bafumana intsingiselo engokomqondiso kwisimo sendlela kaMoo. Iipokotshi ezine kuthiwa ubhekiselele kwiZiqulatho ezine kwi-管子 ( Guǎnzi ), ukuhlanganiswa komsebenzi wefilosofi obizwa ngokuba ngumfilosofi wenkulungwane ye-17, 管仲 ( Guǎn Zhòng ).
Ukongezelela, amaqhosha amahlanu ahambelana namasebe amahlanu karhulumente kumgaqo-siseko weRiphabhlikhi yaseChina, ephethe iziphathamandla, ezomthetho, ezomthetho, zolawulo kunye noviwo. Amanqwanqwa amathathu kwiikhekhthi amele i-Sun Yat-sen yeZiqendu ezintathu zabantu (三民主義). Imigaqo yintlanga, amalungelo abantu kunye nokuphila kwabantu.
Iintsuku ezidumile zeMao Suit
I-suit ye-Mao yayidalwe kuma-1920 nee-1930 ngabasebenzi baseChina. Inguqu eguquguqukileyo yayigqitywe ngumkhosi kwaze kwaba yimfazwe yeSino-Japanese. Phantse bonke abantu babembethe emva kokusungulwa kweRiphabhliki Yabantu baseChina ngo-1949 de kube sekupheleni kweNkcubeko yeNguqulelo ngo-1976.
Ngeeminyaka yama-1990, i-suit mao yayishenxiselwa indawo yeshishini leNtshona. Nangona kunjalo, iinkokheli, ezifana noDeng Xiaoping kunye noJiang Zemin, zimbethe i-suit yeMao kwiimeko ezizodwa. Ininzi intsha iyakuthanda iifenethi ze-Western, kodwa akuqhelekanga ukubona izizukulwana ezindala zamadoda ezigqoka ii-Mao kwiziganeko ezizodwa.
Ndingayithenga phi i-Mao Suit?
Phantse zonke iimarike kwiidolophu zaseTshayina ezinkulu kunye ezincinci zithengisa ama-suit eZhongshan. Abathengisi banokwenza iimeko eziqhelekileyo zamaMao ngosuku okanye ezimbini.
Isingeniso kwiZikolo zeZikolo kunye neeNkcubeko eChina
I-Chinese National Anthem
Daoism e China
Kuphi ukugubha umnyaka omtsha waseTshayina eTaiwan
Isikhokelo seTahjong Tile Meanings
Abani Abalindi Ababomvu baseChina?
Yintoni i-Acidity okanye ipH yobisi?
ILizwi laseTaliyane loSuku: Ndibulumke
Zininzi iindlela zokuthi hayi ngesiFrentshi
Venus eVirgo - Signus Signs
Isatifiketi seMatriki aMandla kunye neeMveliso ezixabisekileyo
I-10 yeeNtshontsho eziPhambili kwiHlabathi
Scientific Method Inkcazo
UPapa Innocent III
Indima ye-Linebacker kwiBhola
Ukuchaza iindleko zeHumank
Umgca wokuLoba: Inyaniso malunga nokuPhula amandla
I-WordStar-Inkqubo yeLizwi lokuQala